Konkrete kiyi → Mota yekupaka • Fence • Ultratense Concrete®
Zvivakwa zvidiki gadzira zvishoma architectural zvinhu sanganiswa mu Urban Space kana iri panzvimbo yepachivande uye ichipa hunhu kune yakatarwa nzvimbo. Concrete machira, zvazvino mabhenji, sheds, tafura, maruva nemaruva, marara, bhasikoro rakamira.
Zvinhu zvakadaro zvakare kongiri zvimisikidzwa zvakaiswa munzvimbo yemaguta uye Kuvhiringidza kutenderera kwekutenderera munzvimbo yakapihwa. Ivo ndekushongedza uye panguva imwechete vane basa rakakosha, kudzivirira kupaka munzvimbo dzisina kukodzera.
Izvo zvakasiyana-siyana zvemagadzirirwo zvinobvumira kusarudzwa kwekongiri kongiri iyo inonyatsokodzera nzvimbo yakatenderera yemataundi.
Nzvimbo dzinowanzoshandiswa dzinogadzirwa nehuni, simbi uye kongiri.
Konkrete fenzi mapepa, kunge akasiyana nemapuranga, akagadzirwa nesimbi yakasimba isina kuora uye inosangana nekurwisa zvipembenene..
Konkrete mapepa akasimba uye akasimba.
Ivo vanowanzoshandiswa mumapurazi, gadheni emumba nemayadhi, uyewo munzvimbo dzemaguta yeruzhinji, semuenzaniso se yokupaka mabollard kana fenzi.
Konkrete fenzi mapepa zvakare chinhu chisinga paradzanisike chechishoma kuvaka, kwete chete munzvimbo dzeruzhinji, asiwo pane zvakavanzika zvivakwa.
Fenzi inonzi inoita basa rayo nemazvo kana ichiita nemazvo fence postszvinoita kuti vasimuke. Izvo zvinyorwa kubva kwavari ivo ivo zvavanogadzirwa zvinokutendera iwe kuti uone simba ravo uye kushandisa. Fence machira anogona kuve akagadzirwa nehuni, simbi, kongiri kana dhayeti simbi.
Iwo akasiyana mumutengo, durability, nyore kuisirwa uye aesthetics.
Kunyangwe mabara Konkrete vakasimba kwazvo, kugona kwavo kushata uye kugara uchingopaza. Kana mvura ikasanganiswa mukuputika, inogona kutonhora munguva yechando uye kuita kuti zvikamu zvechikamu zvibve.
Vamwe vanhu vanofarira kushandisa zvigadzirwa zvakagadzirwa nezvimwe zvinhu, zvinosanganisira: simbi yakasvinwa, simbi kana huni.
Concrete machira ivo vanowanzove anodhura kupfuura avo emapuranga, asi haudi kuchengetwa kwegore uye impregnation.
Iyo iripaside ndeyekuti iri pakati kongiri kongiri inorema kunyange makumi mana emakirogiramu, iyo inowedzera mutengo wekusangana, kunyange kune rumwe rutivi, zvimedu zvekongiri zvinopa rubatsiro rwakasimba.
Konkrete mabollard anogona kutengwa kuzvitoro zvekuvandudza dzimba kana zvakananga kubva kune iyo inogadzira, iyo inowanzopa zvigadzirwa zvine yakasimba kusimba uye isinganyanyi kujairika dhizaini.
Concrete machira Guta Fomu Rokugadzira
Guta Fomu Dhizaina kongiri bollards anozivikanwa neazvino dhizaini, uye mhando yepamusoro yezvigadzirwa izvi inosimbiswa nekugara uchiongorora zvinhu uye zvigadzirwa zvehunyanzvi.
Kambani yedu inoshanda nezvakanyanya dzimba dzekuvaka uye vagadziri, iyo inovimbisa chimiro chakanakisa uye kushanda kwezvinhu zvidiki zvekugadzira zvakagadzirwa nazvo.
Gadzira Dhizaini ndiye ega mumiriri wemakambani eItaly Metalco uye Bellitalia muPoland.
Metalco inopa huwandu hwakasiyana hwebindu diki uye zvigadzirwa zvemaguta ekuvakwa zvakagadzirwa nesimbi nehuni.
Iyo inopihwa inosanganisira zvinhu zveguta nzvimbo, i.e. mapaki, migwagwa, magadheni uye zviteshi.
Metalco inogadzira mabhenji, mabhasiketi emigwagwa, zvikwangwani, mabhodhi emashoko, chifukidzo chemiti, maruva emaruva, mabhureki emabhasiketi uye mhando dzakasiyana dzemidziyo yemigwagwa, semuenzaniso.
Bellitalia ndeimwe yemakambani anotungamira ekugadzira kongiri, yemarble uye yakasikwa mabwe wedomboayo anoshandiswa kugadzira zvinhu zvemidziyo yemigwagwa.
Iyo kambani yakavambwa mumakore e60 muItaly uye nanhasi ichisiyaniswa neyemhando yepamusoro zvigadzirwa, hunyanzvi uye hunyanzvi hwemazuva ano.
BELLITALIA Srl inogadzira zvinhu zvidiki zvemaguta ekuvakwa. Kune mabhenji ekongiri akanyorwa, mabhodhi eruzivo, kongiri uye nematombo, matsime, zvimiro zvinodzora traffic pane zvekuratidzira nenzvimbo dzekutamba, pamwe nekongiri, dombo kana kutevedzera ibwe marara marara, zvinozivikanwa pasi rese.
Bellitalia inogadzira uye inotengesa mazana emabasa anoshanda uye akanaka kwazvo anokwana mune chero nzvimbo yemadhorobha.
Kufumisa kuunganidza, zvigadzirwa zvitsva zvakawedzerwa kune zvirongwa zvinomuka: simbi isina chando, yakakanda simbi nehuni nenzira zvekuti vanoenderana kongiri nekugadzira chimiro chitsva.
Mukugadzirwa kwayo BELLITALIA® inoshandisawo zvinhu zvematombo anokosha uye marble akaunganidzwa akapfuma mavara uye ane maitiro ekugadzira.
Nhasi Bellitalia mutungamiriri mukugadzira uye kutengesa fenicha yemumugwagwa. Inoshandisa zvinhu zvakaita senge marudzi akasiyana ekongiri (HPC, UHPC), yakadzoreredzwa mabwe emabwe emarble, granite yakaunganidzwa, glossy kongiri, huni nesimbi.
Izvo zvigadzirwa zvekugadzirwa kwekongiri zvinoshandiswa neBELLITALIA® zvinobva kune dzakapoterera Dolomites. Izvi zvinobvumira kushandiswa kwakaderera kwemafuta uye yakaderera CO2 emissions yekufambisa kwavo.
Zvigadzirwa zvinobva kuItaly zvidhori zvinogadziriswazve uye zvinoshandiswa kugadzira iyo inopangana yemabwe anokosha.
Kongiri yakagadzirwa nenzira iyi zvinhu zvinoenderana, zvinogara uye zvinogadziriswazve, saka huwandu hwekushandisa zvakare hauna muganho.
Muna 2015, BELLITALIA® yakagadzira formula inovandudza Ultratense Concrete ®.
Icho chitsva chinhu chinokubvumira kuti ugadzire zvinhu zvitsva uye zvinonakidza zvinhu zvinoshandiswa munzvimbo yemaguta yeruzhinji.
Ultratense Concrete ® chiratidzo chakanyorwa cheBellitalia chete. Yakagadzirwa mukudyidzana nemasayendisiti kubva kuFultulty yeMatter, Environmental and Urban Engineering paUniversity yeMarche (SIMAU) uye ane mukurumbira masitudiyo studio.
Iyo yekuvandudza kongiri zvinhu zvakagadzirwa nekushandiswa kweazvino Ultratense Concrete® matekinoroji ari epurasitiki zvakanyanya uye nekuda kweayo zvivakwa zvinogona zvakare kukandwa muforoma.
UTC® chinhu chine hunyanzvi hwekugadzira michina, iyo inogonesa kugadzirwa kwezvinhu zvigadzirwa zvakatetepa uye yakamoneredzwa matatu-mativi nzvimbo.
5 / 5 ( 28 mavhoti )
kongiri dzekupirakongiri yepasi kosikongiri kongirizvekuumbwa kwezvekongiri zvemukatimipanda, zvimedu zvekongiribvumidzwaconcrete machiracastorama kongiri zvitaurokongiri zvimedu mutengokongiri zvitairo mutengo rondedzerokongiri dzekupira fenzikongiri zvimiro zvemadziro epurangakongiri zvimiro zvebindukongiri zvimiro zvetakongiri dzezvikumbaridzo zvemusango mamburekongiri kongiriyekushongedza kongiri yekushongedzakongiri kupaka mabhodhizvimedu zvekongiri pasi pepasizvimedu zvekongiri pasi pemutengo wetaizikongiri zvimiro zviyerofence postskongiri kongiricastorama kongiri kongiri zvindoriyokupaka mabollardkongiri kupaka mabhodhiUltratense Konkrete